Margarekha किन ​​​​अकथा​ह​रू​ लेखिन्छन्? – Margarekha
किन ​​​​अकथा​ह​रू​ लेखिन्छन्?
आफूले लेखेको कृतिबारे बोल्ने म उचित पात्र ​हुँ​ जस्तो मलाई लाग्दैन। आफ्नो आलोचना गर्दा ​कत्तिको ​निष्पक्ष ​ भइन्छ त्यो​ पनि​ भन्न सकिन्नँ। ​यसका लागि हिम्मतको ​त्यत्तिकै आ​व​श्य​क​ता पर्छ। प्र​शंसामा ​अहंकार झल्कन्छ। ​अहंकार​ कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन।​ ​
मलाई केही साहित्यका पारखीहरुले अकथा कुन विधा अर्थात जन्न (genre) मा पर्छ भनेर सोध्नुभो । मैले १६० पेज लामो पान्डुलिपी मेरा दाजुलाई पठाएको थिएँ, सम्पादनको लागि भनेर। १६० पेज लामो पान्डुलिपीलाई ५२ पेजमा झा​रिदिने मेरा दाजु​,​ जो आफूलाई सम्पादक भन्न रुचाउनु हुन्न, उ​हाँ​लाई आ​वे​​गमा आएर प्रश्न ​गरेँ, ‘यो के गरेको?’ उ​हाँले​ भन्नु​भयो, ‘यो कुन जन्न(genre) मा पर्छ म भन्न चाहन्नँ। जुन कुरा तिमी नबोलेर भन्न सक्छौ, नबोल।
जुन कुरा एक लाइनमा भन्न सकिन्छ, ​त्यसका​ लागि लाखौं शब्द खर्च नगर। लेखक बन्ने दौड्मा सामेल नहोउ। क्रम भङ्ग​ गर। आनन्द आउनेछ। बाँकी मेरो भन्नु केही छैन। म पेजको संख्या घटा​उ​नेबाहेक सम्पादन ​गर्दिनँ।​ ​किन भने अकथाको एसेन्स​​,​​ आत्मा मर्नेछ।’​ म नाजबाफ भए।
टेक्निकली भन्नुपर्दा अकथालाई आकारमा निर्ममतापूर्वक घटाइ​दिएपछि नोवेला (Novella) अर्थात लघु उपन्यास भित्र राख्न मिल्ला।​ ​तर म ​यसला​ई कुनै ​‘जन्न’​ मा राख्न चाहन्न। यो लघु उपन्यास , आत्म​वृत्तान्त​, कथा​सङ्ग्रह​, यात्रा -संस्म​रण , ​‘एनेक्डट’ अर्थात् द्रिस्नटाण्ट, सबै थोक हो​;​ र केही पनि होइन।
मैले सामाजिक सन्जालमा नविन प्रयोग गरे भनेर उल्लेख गरे। कतिपएलाई ​यसमा​ अहन्कार देखियो। तर ​त्यसो होइन। मैले अकथामा आफुलाई पात्र बनाए। ​​त्यो पनि मजाकको पात्र। आफूलाई ​चिरफार​​ ग​रेँ। आफू माथि ​हाँस्न​ हिम्मत चाहिन्छ । मैले दिवाकरलाई पात्र बनाएर, उकुसमुकुस, ​पी​डा, छट्पटाहटमा ​बाँ​चेका थुप्रै आत्माहरुको स्वर मुखरित गरेको मात्र ​हुँ​। म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र ​भइ​दिएको ​हुँ।​ ​मैले ​यति​ मात्रै ग​रेँ।
मैले लेखनमा तीन भाषाको प्रयोग ग​रेँ​। तीनै भाषामा मेरो दक्षता छैन। मैले हाम्रो ​विविधता​ र भाषाको मिठास अनी सौन्​​दर्यको सम्मान गरेको मात्र ​हुँ​। मलाई आफ्नो भाषिक अभि​व्यक्तिप्रति एक रत्ती अभिमान छैन। न​ ​त मलाई बौधिक ​हुँ​ भन्ने भ्रम छ ।अकथा ​ ​​व्यक्तिगत इच्छा ​पूर्ति गर्न लेखिएको होइन। यो लेखिनु पर्थ्यो। लेखियो।
अकथा प्रेम , सद्भभाब , समान्ता र मानवता स्थापनार्थ मेरो ​ शाव्दिक अभि​व्यक्ति​ मात्र हो।
मैले आफ्नी हुन नसकेकी प्रेमिका, जसले मलाई जातीसूचक गाली ​दिइन्, ​उनलाई ​भारतका क्रान्तिकारी ​कवि अव्तार सिंह सद्धु ‘पाश’ को ​​क​वि​ता उपहार दिन चाहेको ​थिएँ ​​​। ​
​​क​वि​तामा एक हरफमा भनिएको छ – ‘मैले यस्तो कविता लेख्न चाहेको थिएँ, जो तिमी ​जिन्दगीभर पढ्न ​सक्थ्यौ​।’ उनी फेरि भन्छन्’ अब हतियार ​विरुद्ध युद्व गर्नुपर्छ।’ म यो ​कवि​ताद्वारा ​घृणाको ​निरर्थकता बारे बुझाउन चाहन्थेँ​। तर प्रेम गर्न ​ सिकाईदैन। ​त्यसैले पाश म अब बिदा लिन्छु भन्छन्, उनी भन्छन- ‘मैं अब बिदा लेता ​हुँ​ , तु यह सब भुलजाना मेरे दोस्त सिवा इस्के कि मुझे जिनेकी बहुत इच्छा थी कि मै गले तक जिन्दगी मये डुबना चाह्ता था मेरे ​हिस्सेका भि जिलेना मेरे दोस्त मेरे हिस्से का भि जिलेना।’
आफ्नो ​जीवन ​अरूलाई दिन सक्ने यो क्रान्तिकारी को ​क​वि​ताबिना अकथा अर्थ​ही​न हुन्थ्यो। मेरा लागि जि​व​न लिने होइन, दिनेहरु क्रान्तिकारी ​हुन्​ ,र यही प्रेम हो। मैले महिला र पुरुषको ​वैवा​हिक ​जीवन सफल नहुनुमा आ​फूभित्रको पुरुषलाई मारेर महिला भएर बोलेको छु। यस्का लागि मन भित्रको ज्वलामुखी निभाउने तागत र अदम्य ​शक्ति​ चाहिन्छ। मैले भन्दै आएको ‘टाइगर’ को जस्तो मुटु चाहिन्छ।
अकथा मेरा लागि किताब मात्र होइन। रगत, आसुँ, पसिना , इर्श्या, ​क्ष​माको ​सम्मिश्रण​ हो। शायद ​यहि​ ​सम्मिश्रण जीवन​ हो र ​जीवन​ फिक्सन हो – कल्पना मात्र हो। सत्य त अन​व​रत बगिरहने गंगा मैया हुन्, जसले मलाई चेतना दिइन् कि म नित्य सिद्ध ​हुँ ​, म नित्य बुद्ध ​हुँ ​, म नित्य मुक्त छु ।
म आफ्नो इच्छाको स्वामी ​हुँ। यही हो मेरो अकथा – कथा नभएको कथा। यसलाई पढिदिनुभयो, माया गरिदिनुभयो भने मात्र मलाई पुग्छ।
​​अकथाहरु ले​खि​ईरहनेछन्…अनन्त कालसम्म।सेतोपाटीबाट
१७ असार २०७५, आईतवार १९:४८ प्रकाशित